Baolina kitra - Lalao ara-pirahalahiana :: Foana ny fifandonana tokony hataon’ ny Barea sy ny Club M Maorisy • AoRaha
Baolina kitra – Lalao ara-pirahalahiana Foana ny fifandonana tokony hataon’ ny Barea sy ny Club M Maorisy
Nohamafisin’i Nicolas Dupuis, mpanazatra nasionaly, fa tsy hisy ny lalao ara-pirahalahiana tokony hifandonan’ny ekipam-pirenena malagasy taranja baolina kitra na ny Barea sy ny Club M Maorisy. Lalao tokony hanomanana ny dingana fifanintsanana hiatrehan’ny Barea ny fiadiana ny amboaran’i Afrika na ny Can 2021. “Nofoanana ny lalao noho ny fahataran’ny fiantso­ana, ny faharatran’ny mpilalao sy ny tsy naneken’ny klioba handefa ireo mpilalaony”, araka ny fanazavan’i Nicolas Dupuis.
Mpilalao mpila ravina­hitra miisa enina ambin’ny folo no nantsoinn’ny Federasiona malagasin’ny baolina kitra (FMF). Mbola maratra amin’izao fotoana izao anefa i Voavy Paulin, Lalaina Nomenjanahary na i Bolida ary Pascal Razakanantenaina na i Bapasy, raha ny fanazavan’ ity teknisianina ity hatrany.
Mpilalao efatra ihany koa no tsy afaka ny hanatrika, hoy izy, noho ny fahataran’ny taratasy fiantsoana ka anisan’ izany i Abel Anicet , Ibrahim Amada ary Romain Métanire. Tokony ho dimy ambin’ny folo andro mialoha ny fihaonana no handefa izany tara­tasy izany ny Federasiona raha ny lalàna mifehy ny baolina kitra.
Nanambara anefa i Nicolas Dupuis fa “tsy maintsy mindrana ireo mpilalao miatrika ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika na CHAN 2020 aho mba hamenoana ny isan’ireo mpilalao. Tsy mikasa ny hanao an’izany anefa ny tenako satria lasa mitondra fanakorontanana amin’ny lamina efa nipetraka sy ny fanomanan’ireo mpila­lao hiatrika ny lalao miverina amin’i Namibia izany”.
Ireo mpilalao hanomana ny CAN 2021 izany no tsy afaka tonga eto an-toerana. Mbola mandinika kosa ny ao amin’ny Federasiona na hasiana ihany ny lalao fa ireo mpilalaon’ny Barea hanao ny CHAN 2020 no hiatrika izany ao anatin’ny fanoma­na­na ny lalao miverina amin’i Namibia na tsia. Nanamafy ity teknisianina frantsay ity fa “mbola handinika ny mika­sika an’izany ny tenako miaraka amin’ny FMF rahampitso (ndlr: anio)”.